လူတစ်ယောက်ကို အမှန်တကယ်ချစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ .. - ONE DAILY MEDIA
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိကာစ စစချင်းမှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို သိပါသလား ? အဆက်မပြတ်အောင် စကားစမြည်ပြောလိုသော သို့မဟုတ် စာတိုပေးပို့လိုသော ဆန္ဒများ ဖြစ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စစချင်းမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ခံစားချက်တွေက တကယ်ကို ပြင်းထန်လာပြီး စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြရခက်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၊ သဘောကျခြင်း သို့မဟုတ် အရူးအမူးဖြစ်ခြင်းတို့ကို ခွဲခြားရန် အလွန်ခက်ခဲပါတယ် ။ စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သင့်လက်တွဲဖော်အတွက် အချိန်မရွေး နေရာပေးရန်အသင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက သင်သည် ဤလောကရှိ အခြားသူများထက် ၎င်းတို့ကို ပိုဂရုစိုက်မိပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် သင်ဒီလိုခံစားရဖူးပါသလား။ အချစ်စစ်ဆိုတာ သေချာ မသေချာ သင်ဆုံးဖြတ်တတ်ပါသလား ? သင်ဟာ ချစ်သူအသစ် သို့မဟုတ် ရည်းစားအသစ်နှင့် ယာယီဖြတ်သန်းရုံသာမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုမိနိုင်မည့် ထင်ရှားသောလက္ခဏာအချို့ရှိပါတယ်။ ချစ်မိသွားသည့် လက္ခဏာအချို့ကို လေ့လာရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ပါ။
တစ်စုံတစ်ဦး တကယ်ချစ်နေမိကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ??
(၁) သင်ပျော်နေပြီး နည်းနည်းတော့ တွေဝေနေပါမယ် –
အချစ်ရေးက လူတွေကို စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးလေ့ရှိပါတယ် ။ စုံတွဲလေးတစ်တွဲကြား အချိန်တစ်ခုဖြုန်းတာက သင့်ကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေပြီး ဖုန်းထဲက နှစ်ယောက်လယတွဲ selfie ပုံများ ကြည့်ခြင်းလိုမျိုး ရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကိုတောင် သင့်မျက်နှာမှာ ချိုမြိန်တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ပေါ်လာဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ အချစ်စစ်ဖြစ်ရင် နည်းနည်းတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သေချာမသိရင်တောင်မှ အနာဂတ်မှာ သင်သိလာမှာပါ။လူများစွာသည် အချစ်ကို မဆုံးရှုံးနိုင် သို့မဟုတ် မစွန့်လွှတ်နိုင်ဟု ဆိုကြသော်လည်း ရလဒ်၏ မရေရာမှုမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) လွယ်ကူရိုးရှင်း‌သည်ဟု ခံစားရသည့် အချစ်ရေး
– သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူ ရှိနေခြင်းကို အလုပ်တစ်ခုလို မခံစားရသင့်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ သူတို့နဲ့ အချိန်များများပေးဖို့အတွက် သူတို့နဲ့ အတူနေဖို့ အချိန်ရှာဖို့ ရုန်းကန်နေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အငြင်းအခုံများပင်လျှင် သင့်တွင်ရှိနေသည့် အခြားဆက်ဆံရေးများကဲ့သို့ ပြင်းထန်မည်မဟုတ်ပေ။ စုံတွဲတိုင်း အငြင်းအခုံ ရှိတတ်ကြသည်မှန်သော်လည်း နှစ်ဦးစလုံး ချစ်မိသွားသောအခါတွင် ဦးစားပေးသည် မာနမဟုတ်ပဲ ဆက်ဆံရေးဖြစ်လာပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပါဘဲ သင့်ဘဝကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖို့တောင်မလွယ်ကူပါဘူး။
(၃) စိတ်ထဲမှာ အမြဲနေရာယူထားခြင်း –
အချစ်စစ်ဆိုရင် သင့်လက်တွဲဖော်ဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိနေလိမ့်မယ်။ နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် စကားမပြောဖြစ်တာနဲ့ အဆင်ပြေကြောင်း သိလိုသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖုန်းခေါ်ရန် တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အချစ်က ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အရံအစီအစဉ်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်နေသောအခါ၊ ၎င်းတို့ကို ဦးစားမပေးတော့ဘဲ သင့်တစ်နေ့တာအတွက် အခြားအရာများကို စဉ်းစားရန် လွယ်ကူပါတယိ။ ဒါပေမယ့် သင်ချစ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ ဒီလူက သင့်စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိပြီး လွှမ်းမိုးနေပါလိမ့်မယ်။
(၄) သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုထံ ခေါ်ဆောင်လာပါ –
သင့်လက်တွဲဖော်ကို သင့်ဘဝ၏ မတူညီသောရှုထောင့်အားလုံးသို့ ခေါ်ဆောင်သွားလိုမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ကို သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါက၊ သင်သည် ဤလူကို အမှန်တကယ် ဂရုစိုက်ပြီး သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးကို ရေရှည် တည်တံ့စေလိုသောကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။